No. 2150, Monday, June 10, 2019 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 2150, Monday, June 10, 2019
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၈ ရက် (တနင်္လာ၊ ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၉)
လူတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူက အဲ့ဒီသူရဲ့ skill တွေ၊ ability တွေလိုပဲ အရေးပါပါတယ်။ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကို အထူးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ အပြုအမူကောင်းမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်က ဘယ်လိုနယ်ပယ်မျိုးမှာမှ အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကို မွေးမြူနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
ရန်ပုံငွေ အလွဲသုံးဆိုကာ ပါတီဝင်များက ဒီချုပ်အမတ်နှစ်ဦးကို ဆန္ဒပြ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေများ အလွဲသုံးစားပြုသည့် ပုလောမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကိုအရေးယူပေးရန် ဒီချုပ်ပါတီဝင်များ၊ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
ထိုင်းရေနံကုမ္ပဏီ PTT နှင့် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီအုပ်စု ပူးပေါင်း၍ စက်သုံးဆီဆိုင် ၇၀ ဖွင့်မည်
ထိုင်းရေနံကုမ္ပဏီ PTT နှင့် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီအုပ်စုတို့ ပူးပေါင်း၍ ပြည်တွင်း၌ စက်သုံးဆီဆိုင် ၇၀ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆီလှောင်ကန်နှင့် မီးဖိုချောင်သုံး ဓာတ်ငွေ့ရည်(LPG) သိုလှောင်ကန်များတွင်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အယ်လ်ဗာရက်ဇ်နှင့် တတိယပွဲထိုးသတ်ရန် အသင့်ရှိဟု ဂိုလော့ဗ်ကင် ပြောကြား
နယူးယောက်မြို့ တွင် ထိုးသတ်ခဲ့သောပွဲတွင် မစ် ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံဟောင်း ဂို လော့ဗ်ကင်က ကနေဒါနိုင်ငံသား စတိဗ်ရိုးလ်ကို လေးချီအတွင်း အ လဲထိုး အနိုင်ယူခဲ့သည်။
အဂတိမှုဖြင့် တရားခံပြေး ၂၀ ဦး စာရင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက် ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မများဖြင့် တ ရားစွဲဆိုခံရမှုကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်နေသည့် တရားခံပြေး ၂၀ ဦး၏ ရုပ်ပုံများနှင့် ၎င်းတို့ကို တွေ့ရှိပါက နီးစပ်ရာရဲစခန်းများ သို့ အကြောင်းကြားပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ယမန်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။
စစ်ရှောင်များပါဝင်သည့် ကချင်စစ်ဘေး (၈)နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်ပြဇာတ် မြစ်ကြီးနားမြို့လယ်၌ တင်ဆက်ပြသ
တပ်မတော်နှင့် ကချင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (KIA)တို့အ ကြား တစ်ကျော့ပြန်စစ်ပွဲဖြစ်ပွား မှု (၈)နှစ်ပြည့်သည့် ဇွန်လ ၉ ရက် တွင် စစ်ရှောင်များကိုယ်တိုင် ပါ ၀င်သည့် ကချင်စစ်ဘေး (၈) နှစ် ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ပြဇာတ်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့လယ်၌ တင်ဆက် ပြသခဲ့သည်။
ကျားခေါင်းက ဒီချုပ်ကို ကန့်ကွက်သည့် ရွေးကောက်ပွဲအယူခံအမိန့်ချတော့မည်
၂၀၁၈ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် မန္တလေးတိုင်း ရှမ်း တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကိုယ်စား လှယ်အဖြစ် အနိုင်ရရှိသော ဒီချုပ် ပါတီဝင် ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်ကို ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းထားမှု ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မ ရှင်ခုံအဖွဲ့က ဇွန်လ ၁၃ ရက်တွင် အမိန့်ချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။
ခရစ္စမတ်ပွဲအတွက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းနေသည့်အိမ်ကို လူတစ်စုက ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်မှု နှစ်ဖက်ကျေအေး
ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၌ ခရစ္စ မတ်ပွဲတော်အတွက် ဝတ်ပြုဆု တောင်းရန် ပြင်ဆင်နေသည့်အိမ်ကိုလူတစ်စုက ခဲဖြင့်ဝိုင်းပစ်ခဲ့ သည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုထားမှုကို တရားလိုနှင့်တရားပြိုင်နှစ်ဖက်စလုံးက ကျေ အေးခြင်းဖြင့် အမှုပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။
တပ်မတော်နှင့် AA တိုက်ပွဲကြောင့် ပလက်ဝဒေသခံ ၆၀၀ ကျော် စစ်ဘေးရှောင်
တပ်မတော်နှင့် ရခိုင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့(AA) တို့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝဒေသတွင် မေ လ ၇ ရက်က စတင်တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားနေ၍ ကျေးရွာသုံးရွာမှ ဒေသ ခံလူ ၆၀၀ ကျော်သည် ပလက်ဝမြို့ ပေါ်သို့ ထွက်ပြေးလာသည်ဟု ဒေသခံ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း များက ပြောသည်။
လားရှိုးမြို့ နမ့်ကျန်ဆည်အတွင်း စောင်ဖြင့်ပတ်၍ နှစ်မြှုပ်ထားသော ရုပ်အလောင်းတွေ့
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်း ရှိ အဓိက စီးပွားရေးမြို့ဖြစ် သော လားရှိုးမြို့ရှိ နမ့်ကျန်ဆည်အတွင်း စောင်ဖြင့်ပတ်ထားကာဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသော ရုပ်အလောင်းတစ်ခုတွေ့ရှိပြီး သေဆုံးသူနှင့် လူသတ်မှုကျုးလွန်သူကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးနေသည်။
လူမျိုးရေးအမုန်းတရား မကြီးထွားစေရေး ထိန်းသိမ်းရန် ရခိုင်ခေါင်းဆောင်များကို ခူမီးချင်းမျိုးနွယ် အစုအဖွဲ့များ မေတ္တာရပ်ခံ
ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအ ဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးနှင့် ၀န်ကြီးဟောင်း အချို့အပါအ၀င် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်အချို့အား လူမှုကွန် ရက်မှတစ်ဆင့် အသက်အန္တရယ် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရကြောင်း၊ ဒေ သတွင်း မလိုလားအပ်သည့် နား လည်မှုလွဲမှားခြင်း မဖြစ်စေရန်နှင့် အမုန်းတရားများ မကြီးထွားစေ ရေး ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ရခိုင်တိုင်းရင်း သား ခေါင်းဆောင်များကိုမေတ္တာ ရပ်ခံကြောင်း ခူမီးချင်းမျိုးနွယ်စု များရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ကောင်စီ (KACC) က ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမြို့ တော် နေပြည်တော်၌ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် အခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၅၉(စ) ကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များအပါအ၀င် လေးနှစ်ခန့်အတွင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု ၄၇ ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်း သမ္မတရုံးပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဦးရေ တိုးလာ၍ အရေးပေါ်အကူအညီများ လိုအပ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ တိမ်းရှောင်နေရသူ ငါးသောင်း ကျော်ရှိလာပြီး မိုးရာသီဝင်ရောက် လာသဖြင့် အရေးပေါ်အကူအညီ များလိုအပ်နေကြောင်း လူမှုကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း များက ပြောသည်။
ဦးဝီရသူကို မိအောင်မဖမ်းသည့် အဖွဲ့အစည်းများ သမိုင်းဆိုးမည်ဟု သာသနာရေးတာဝန်ရှိသူသတိပေး
ဖမ်းဝရမ်းထုတ် ထားသည့် ဦးဝီရသူကို မိအောင် မဖမ်းသည့် အဖွဲ့အစည်းသည် သမိုင်းဆိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယအမြဲ တမ်းအတွင်းဝန် ဦးဇာနည်ဝင်းက ပြောသည်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ဖဲဝိုင်းဝင်ဖမ်းရာမှ ချဲဒိုင်ဖမ်းမိ
မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေး သာစံမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းတိုက် တစ်ခုတွင် ဖဲဝိုင်းပြုလုပ်နေ ကြောင်း တိုင်ကြားချက်အရ ဝင် ရောက်ရှာဖွေရာမှ လောင်းကစား ဒိုင်လက်ခံထားသည်ကို ဖမ်းဆီးရ မိကြောင်း အဆိုပါမြို့နယ်သံဃ နာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဦးဓမ္မက မိန့်ကြားသည်။
အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် တစ်လလျှင် ကုမ္ပဏီအသစ် ၁,၄၀၀ ကျော် မှတ်ပုံတင်
အွန်လိုင်းစနစ် အသုံးပြု ပြီးနောက် တစ်လလျှင် ကုမ္ပဏီ အသစ် ၁,၄၀၀ ကျော် မှတ်ပုံတင် နေပြီး လက်ရှိတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ကုမ္ပဏီ ၆၄,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီဖြစ် ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော စာရင်းများတွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
နိုင်ငံခြားငွေ ပြန်လည်ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသောကုမ္ပဏီများ စာရင်းထုတ်ပြန်
ပို့ကုန်တင်ပို့ပြီး ဘဏ်စာ ရင်းသို့ နိုင်ငံခြားငွေပြန်လည်ပေး သွင်းရန်ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ၄၀ အနေဖြင့် နှစ်လအတွင်းငွေသွင်းရန် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနက ဇွန်လ ၆ ရက်စွဲဖြင့် အသိပေး ကြေညာစာထုတ်ပြန်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ အခွန်သက်သာသော ဆန်ကွဲ တရားဝင်ရောင်းချရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ထိုးမည်
တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်အ ပြင် အခွန် ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ခံမည့် ဆန်ကွဲကိုပါ တရားဝင်ရောင်းချနိုင်ရန် နားလည်မှုစာ ချွန်လွှာ မကြာမီလက်မှတ်ရေးထိုး မည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအ သင်းချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးမျိုးသူရအေးက ပြောသည်။
အပစ်ရပ်သက်တမ်းမကုန်မီ အစိုးရနှင့် မြောက်ပိုင်းလေးဖွဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ဟု PCG ယူဆ
တပ်မတော်၏ တစ်ဖက် သတ်အပစ်ရပ်ကြေညာမှု ယခု ဇွန်လကုန်တွင် သက်တမ်းကုန် ဆုံးမည်ဖြစ်၍ အစိုးရနှင့် မြောက် ပိုင်းလက်နက်ကိုင်လေးဖွဲ့၏ ဆွေးနွေးပွဲကို အဆိုပါကာလအတွင်း ကျင်းပသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေး ကြားဝင်ညှိနှိုင်း ပေးနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုး ဆောင်အဖွဲ့ (PCG)မှ ဦးလမိုင်ဂွန်ဂျာက ပြောကြားသည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူမျိုးအစစ်အမှန်က လူသားမျိုးနွယ်ပါပဲ။’’ - အိပ်ခ်ျဂျီဝဲလ်စ် (အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ)
မယ်ခွေ၏ လက်ဆောင်ကဗျာကို အဋ္ဌမတန်းသင်ရိုးတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးရန် ဆရာများအဖွဲ့ချုပ်တောင်းဆို
လက်ရှိအဋ္ဌမတန်းမြန်မာ စာသင်ရိုးမှ ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် မယ်ခွေ၏ ‘လက်ဆောင်’ကဗျာကို အဋ္ဌမတန်း (Grade-9) သင်ရိုး တွင် ခြွင်းချက်မရှိပြန်လည် ထည့် သွင်းပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင် ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများအဖွဲ့ချုပ် (MTF) က ဇွန်လ ၉ ရက်စွဲဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်တောင်း ဆိုသည်။
. တိုက်စစ်မှူးနေမာသည် ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် သီတင်းလေးပတ်အတွင်း ဒဏ်ရာမှပြန်လည်သက်သာလာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက ပြောသည်။
အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဖလားတွင် စပိန်၊ နော်ဝေးနှင့် ဂျာမနီတို့ နိုင်ပွဲဖြင့်စတင်
ပြင်သစ်နိုင်ငံက အိမ်ရှင်အ ဖြစ် လက်ခံကျင်းပနေသော အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် စပိန်၊ နော်ဝေးနှင့် ဂျာမနီအသင်း တို့နိုင်ပွဲကိုယ်စီဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့သည်။
ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲများတွင် အီတလီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့် ဂျာမနီအနိုင်ရ
ဇွန်လ ၈ ရက်က ကစား ခဲ့သော ယူရို ၂၀၂၀ ခြေစစ်ပွဲစဉ် များတွင် အီတလီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ နှင့် ဂျာမနီတို့ အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ပြိုင်ဘက် အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးပါတီကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား၍ လူလေးဦး သေဆုံး
အနောက်ဘန်ဂေါ ပြည်နယ်၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ် ပွားရာ အိန္ဒိယအာဏာရ လက် ယာယိမ်းပါတီ ထောက်ခံသူ သုံး ဦးနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ပြိုင်ဘက် ပါတီမှ တစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးက ဇွန်လ ၉ ရက်တွင် ပြောသည်။
နယ်နှင်ရေးဥပဒေကြမ်းကို ဟောင်ကောင် ပြည်သူများ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ
ဟောင်ကောင် ဒေသရှိ နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံ များအပေါ် ပစ်မှတ်ထားခွင့်ပြုနိုင် သည်ဟု ဝေဖန်သူများက စိုးရိမ်သော ဥပဒေတစ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင် ၍ ဟောင်ကောင်တွင် လူထောင်ပေါင်းများစွာ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ သည်။
တစ်ဦးတည်းသော ကျောင်းသူကို မိန့်ခွန်းပြောမည့် သရုပ်ဆောင် ဂျင်နီစလိတ်
မက်ဆာချူးဆက် ပြည်နယ် ကတ်တီဟန့်ခ်ကျွန်း ငယ်လေးမှ တစ်ဦးတည်းသော ကျောင်းသူသည် ဟာသနှင့် သရုပ်ဆောင် ဂျင်နီစလိတ်၏ အထူးချီးမြှောက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဗုံးခွဲမှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သီရိလင်္ကာအမတ်များနှင့် သမ္မတ အချေအတင်ဖြစ်
အီစတာအသေခံဗုံးခွဲ မှုများမတိုင်မီ လုံခြုံရေးလျော့ရဲ ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် အငြင်း ပွားဖွယ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို မဖျက်ဆီးရန် သီရိလင်္ကာလွှတ်တော်က သမ္မတ မိုင်သီရိပါလာသီရိဆီနာ အား သတိပေးကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရုံးက ပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ ကျောက်တန်းရွာဖြစ်ရပ် စစ်ဆေးချက် ယနေ့ သမ္မတထံတင်မည်
ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (AA)နှင့်ပတ်သက်၍ မသင်္ကာသူ ၂၇၅ ဦးကို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး အရပ်သားခုနစ်ဦး သေဆုံးခဲ့သည့် ကျောက်တန်းရွာဖြစ်ရပ် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်ကို လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က နိုင်ငံ တော်သမ္မတရုံးသို့ ယနေ့ တင်ပြ မည်ဖြစ်သည်။